Waaxda socdaalka Soomaaliya oo dalka ku baahinaysa meelaha laga heli karo Baasaboorka (Dhegeyso) – Radio Daljir
Waaxda socdaalka Soomaaliya oo dalka ku baahinaysa meelaha laga heli karo Baasaboorka (Dhegeyso)
Diseembar 23, 2013 1:57 b 0
Muqdisho, December 23, 2013 – Waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda Soomaaliya ayaa baahinaysa Baasaboorka Soomaaliga gaar ahaan nooca ku sumtan E. sida uu sheegay taliyaha waaxda socdaalka ee Soomaaliya.
Gen. Cabdulaahi Gaafow Maxamuud ayaa xusay in hay?addu ay mudo dheer ku mashquulsanayd horumarinta Baasaboorka oo haatan la doonayo in loo baahiyo si baaxad leh.
Waxaa uu sheegay Gen. Gaafow inay haatan qorshaha ku dareen in dadka loo fududeeyo helista aqoonsiga, iyagoo ka heli kara meelaha ay ku yaalan dowladaha hoose oo idil.
Waxaa kaloo qorshaha ku jirta in dadka loo sahlo qaadashada, sida uu dalbaday madaxweyaha dalka Xasan sheikh Maxamuud oo shalay ka hadlay mashruuca hanaanka cusub ee loo bixin doono aqoonsiga.
Gen. Gaafow ayaa ugu dambayntii sheegay in dadaalka ay sameeyeen kadib haatan la aqoonsaday Baasaboorka Soomaaliga ee E. kaas oo lagu geli karo safaro isla markaasna lagu dalban karo Fisa dalalka caalamka qaarkood.
Dhegeyso: – Gen. Gaafow oo khudbad ka jeedinaysa furitaanka mashruuca cusub ee Aqoonsiga